ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ: စစ်ဘီလူးကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန် စည်းလုံးညီညွတ်စွာရုန်းထွက်
Mr.Guiter March 6, 2010 at 7:00 PM
သားသမီးဆိုတာ မိဘကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြဘူး
ဒီလိုလူမျိုးခြား မိဘကနေ မွေးလာလို့ လူဖြစ်ရကျိုးမနပ်ဘူးလို့ ဆိုရင်
မဆုမွန် March 11, 2010 at 7:45 AM
ရင်နဲ့ခံစားပြီး ဖတ်သွားတယ်ရှင် ထိုင်းမှာ ငါးနှစ် နေခဲ့တာဆိုတော့ အကုန်သိကြားမြင်နေရတော့ အရမ်းခံစားရတယ်..
Nge Naing March 11, 2010 at 12:45 PM
လာဖတ်သွားပါတယ်။ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ အားပေးနေပါတယ်။ ကျွန်မသတိထားမိတာ လူမျိုးခွဲခြား၊ လူတန်းစား ခွဲခြားတာ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက တခြားလူမျိုးတွေထက် ပိုဆိုးသလိုပဲ။ လူသားအချင်းချင်း ခွဲခြားခြင်း ကင်းဝေးပါစေ။
အင်ကြင်းသန့် March 18, 2010 at 6:10 AM
Sit Mone's Mosaic Thoughts April 7, 2010 at 11:43 PM
Keep up your good work. Nice and interesting posts for those who wish to see something more than narrow minded nationalism. This blog is all about Humanity.